Packaging Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Fashoni inotenderera maruva hanzi Chipo bhokisi kurongedza
Fashoni inotenderera maruva chipo chebhokisi bhokisi bhokisi kurongedza Kana iwe uchida kuisa maruva ako akanaka mubhokisi uye uite kuti iwo atarise. zvirinani sarudza yedu yekurongedza bhokisi, yakapfava maitiro asi yakasarudzika, unogona kuva nayo munguva imwe chete. Ruva rakarongedzwa bhokisi rine chivharo,...
Yepamberi yetsika hat yekuisa bhokisi nevharo
Yepamberi yetsika hat yekuisa bhokisi nevharo H ku Packaging Bhokisi , uine mhando uye gook kutarisa, Custom hat bhokisi, wana yako dhizaini, yakakwana imwe uye imwe uye imwechete munyika, Hat Chipo bhokisi kurongedza, unogona kuishandisa sechipo, chiri nyore asi chenyasha, vimba shamwari dzako achachida. Tsvaga...
Kupisa tsika yewaini kurongedza bhokisi neobata
Kupisa tsika yewaini kurongedza bhokisi neobata Giredhi yakanaka yewaini yebhokisi bhokisi, saizi yakakodzera yewaini, Zvakare zvakare zvakanaka seWine Chipo Bhokisi, yakapusa asi isingadhuri, inotaridzika zvakanaka, Waini bhokisi rakabata, riri nyore kutakura uye rakawanda runyoro. Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd...
Yakakurumbira Sipo Pepa Packaging Bhokisi neLid
Yepamberi Yakakurumbira Soap Packaging Bhokisi neLid Iyi sipo yekuisa bhokisi yakagadzirwa nenzira yakapfava yebhokisi: chivharo uye base bhokisi, asi inotaridzika iine hunyanzvi neyemhando yepamusoro yeCMYK kudhinda, iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mapepa akakosha kunge pepa reparera, pepa rekushongedza, pepa...
Yepamberi kadhibhodhi ribhoni kupeta zvipo mheji bhokisi
Yepamberi kadhibhodhi ribhoni kupeta zvipo mheji bhokisi Folding yechipo bhokisi, mhando yepamusoro uye yakasarudzika, yakanaka sarudza yekupfeka zvipfeko. Packaging kupeta bhokisi, neribhoni uye magineti. Tsika yekupukuta bhokisi, nechiratidzo chako chakadhindwa uye kupedzisa kwepasi, ita yako kambani ficha. Tsvaga...
Mufashoni Yakasarudzika kadhibhodi kasiketi hembe bhokisi kurongedza
Mufashoni Yakasarudzika kadhibhodi kasiketi hembe bhokisi kurongedza Scarf yekurongedza bhokisi, ine yakanaka uye yakakurumbira huwandu mukadzi akanaka. Shirt yekuisa bhokisi, chipo chakanaka chehembe dzevarume. Packaging bhokisi nevharo, yakanaka dhizaini yekurongedza. Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori...
Yepamberi Yetsika Pepa Kenduru Packaging Chipo Bhokisi
Hombe yakasarudzika kenduru inorongedza zvipo bhokisi Huru yemakenduru bhokisi, rine mhando yepamusoro uye yakasarudzika dhizaini, Kurongedza kenduru bhokisi sechipo, vanhu havagoni kuibvarura kubva mairi, Kenduru bhokisi ine lid, iwe unogona nyore kuvhura uye kutarisa kwakanaka. Tsvaga zvigadzirwa zvemhando...
Inotapira Tsika Yemuchato pilo yezvipoko bhokisi
Inotapira Tsika Yemuchato pilo yezvipoko bhokisi Pachipo bhokisi kurongedza, HOT chimiro chine mhando yakanaka uye yakakodzera mutengo, Muchato wepilo bhokisi, mumuchato, wakanaka, unotapira, wakanaka, Chipo pilo bhokisi, sechipo kune mwenga nemuroora, akatumira zvakanakira kwavari. Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd...
Mufashoni Yakagadziriswa kadhibhodhi kenduru chipo chebhokisi kurongedza
Mufashoni Yakagadziriswa kadhibhodhi kenduru chipo chebhokisi kurongedza Kenduru Packaging Bhokisi, ine mhando yakanaka uye gook inotarisa, Kenduru yekenduru bhokisi, ita yako dhizaini, yakakwana imwe uye imwe uye imwechete munyika, Yakatenderedza kenduru bhokisi nevharo, nyore kuvhura netiye. Saizi yakajairwa,...
Yakasarudzika kenduru yezvinonhuwira zvipo wedhirowa dhiza bhokisi
Yakasarudzika kenduru yezvinonhuwira zvipo wedhirowa dhiza bhokisi Kenduru Bhodhi chipo, chimiro chakanakisa chinoita kuti zvigadzirwa zvako zvive zvakanaka. Kurongedza zvinonhuwira bhokisi, yakagadzirirwa saizi, inogona kuita zvaunoda, kurongedza zvaunoda. Dhirowa kenduru bhokisi, dhizaini dhizaini, inonyanya kukosha...
Fancy pepa chokoreti kurongedza bhokisi chipo
Fancy tsika chokoreti kurongedza bhokisi chipo Chocolate bhokisi kurongedza, hwakanaka uye dhizaina chokoreti. Chipo chokoreti bhokisi, yakaisvonaka bhokisi kurongedza chipo, rinotaridzika. Chipo Bhokisi chechokoreti, yakakwira kirasi yechipo bhokisi. Tsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wakanaka, enda...
Yakasarudzika Kadhibhodhi Shangu Packaging Bhokisi neLid
Yakapeteka kadhibhodhi shangu kurongedza bhokisi nevharo Yekupfekedza shangu bhokisi, yakakwira mhodhi kadhibhodhi, kwete nyore kupfeka-kunze. Bhutsu yezvipo bhokisi, isingave kunze kwechimiro, vatengi vako zvirokwazvo vanozoida. Yako bhutsu bhokisi, ine yako logo uye dhizaini, izere nemakambani maitiro. Tsvaga...
Kadhibhodi ribhoni chipo kurongedza bhokisi nevharo
Kadhibhodi ribhoni chipo kurongedza bhokisi nevharo Chipo chakaputirwa bhokisi, chakasarudzika machira echipo, chinotapira chimiro chinofadza vatengi vako. Chipo bhokisi kuputira, hwakanaka hwakanaka nerembabvu dhizaini, vane yakakosha chimiro. Chipo bhokisi nevharo, iri nyore kuvhura, nyore chivharo asi risingadhuri,...
Yakarembera bhokisi newindo rekurongedza bvudzi
bepa rinorembera bhokisi newindows yekurongedza bvudzi pepa rakachipa rinorembera bhokisi rine yakakwira mhando CMYK kudhinda uye yakajeka PVC winow kuratidza yako zvigadzirwa zvakazara mukati, zvakadaro rimwe gomba kumusoro kuti iite kuti isungirire kune rack Li yang Kudhinda ichakupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro...
Tsika Foldable Sunglass Pepa Packaging Bhokisi
tsika yakapetwa sunglass pepa rekutakura bhokisi folder yepepa bhokisi re singlass kurongedza ine mhando yepamusoro yeCMYK kudhinda iyo mukati mebhokisi yakarongedzwa neainyemwerera Li yang Kudhinda ichakupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wakanaka Isu takazvipira kuti muite kuti mugutsikane, uye ipapo...
Yakaderera Mutengo Yakabhurwa Flyer Leaflet Kudhinda kweMahara
Yakaderera Mutengo Yakapindirwa Flyer / Leaflet Prinda yekudhirowa Yakapindirwa Flyer Kudhinda, mutengo unodhura une mhando yepamusoro, yakazara mavara kudhinda. Pepa Leaflet Kudhinda, yakagadzirirwa saizi uye kudhinda, purinda izvo zvaunoda. Leaflet YeMarestaurant, mhando dzese dzekudhinda kwechikafu mune kapepa,...
Yakaomeswa Kisimusi chipo kurongedza kadhibhokisi bhokisi
Yakaomeswa Kisimusi chipo kurongedza kadhibhokisi bhokisi Iri bhokisi rezvipo rakagadzirwa nenzira yakapfava yebhokisi: chivharo uye base bhokisi, asi rinotaridzika nehuremu hwakanyanya hweCMYK kudhinda, iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mapepa akakosha kunge pepa reparera, pepa rekushongedza, pepa regoridhe...
Fancy Kadhibhodhi Yakagadziriswa Dhiraidhi Bhokisi rehembe
Fancy kadhibhodi yakagadziriswa dhiza dhiza bhokisi rehembe Nguo wedhiza bhokisi, dhiza dhiza bhokisi rekupfeka zvipfeko, zvemhando yepamusoro uye hwoumbozha. Dhirowa bhokisi rinotsvedza, bhokisi rinotsvedza, riri nyore kuvhurika uye rakakosha dhizaini. Slip zvipo bhokisi, zvipo bhokisi rezvipfeko, tsika yakadhindwa...
Yakachipa kraft chimwe chidimbu kupeta kurongedza bhokisi
Yakachipa kraft chimwe chidimbu kupeta kurongedza bhokisi Krafta chidimbu chimwe Bhokisi, chidimbu chimwe chinotenderedzwa kraft pabhokisi bhokisi, mutengo unodhura uine giredhi rakanaka pakushongedza zvigadzirwa. Chimwe chidimbu chakarongedzwa bhokisi, chiri nyore kupeta, chengetedza mari yekutumira uye yakanaka...